Horudhac: Leeds United vs Liverpool… (Labada kooxood oo caawa doonaya inay mid waliba gaarto guusheedii afaraad oo xiriir ah Premier League) – Gool FM
Horudhac: Leeds United vs Liverpool… (Labada kooxood oo caawa doonaya inay mid waliba gaarto guusheedii afaraad oo xiriir ah Premier League)
(Leeds) 19 Abriil 2021. Leeds United iyo Liverpool ayaa labadoodaba sugaya inay gaaraan guushoodii afaraad oo isku xigta ee horyaalka Premier League, marka labada kooxood ay ku kulmi doonaan caawa garoonka Elland Road.
Kooxda caddaanka lagu naynaaso ayaa guul lama ilaawaan ah oo 2-1 ah ka gaartay kooxda hanatay horyaalka ee Manchester City kulankii ugu dambeeyay, halka Liverpool ay ku wajahan tahay kulanka caawa, iyadoo dhawaan laga soo reebay tartanka Champions League.
Garsooraha: Anthony Taylor (England)
Labada Weeraryahan ee Leeds United, Raphinha iyo Rodrigo ayaa labadaba shaki laga galinayaa kulankan, waxaana la marsiin doonaa tijaabo xilli dambe ah.
Kooxda martida loo yahay waxaa ka maqnaan doona kabtankooda Liam Cooper, kaasoo ganaaxan kaddib markii uu kaarka casaanka ah qaatay kulankii ay guusha ka gaareen naadiga Manchester City.
Tababaraha Kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa ku faraxsan wararka sheegaya inaysan jirin wax dhaawacyo cusub ah oo uu ka walwalsan yahay.
Joe Gomez, Jordan Henderson, Joel Matip iyo Virgil van Dijk ayaa weli ka sii maqnaan doona Kooxda Reds.
>- Leeds United ayaa guulaysatay mid ka mid ah 11-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay wajahday Kooxda Liverpool tartammada oo dhan.
>- Leeds ayaa laga dhaliyay 52 gool 25 kulan oo horyaalka Premier League ay la ciyaareen Reds, waana in ka badan inta ay ka dhaliyeen koox kale.
>- Liverpool ayaa hal gool u jirta inay noqoto kooxdii ugu horreysay ee 50 guul ka gaarta Leeds United.
>- Leeds United ayaa kaliya hal kulan shabaqeeda gool ka ilaashatay 21-kii kulan ee ugu dambeeyay oo ay la ciyaartay Liverpool.
>- Kaddib guushoodii 2-1 ee ay ka gaareen Manchester City, Leeds ayaa noqon karta kooxdii labaad ee taariikhda Premier League ee kulamo isku xiga garaacda hoggaamiyeyaasha horyaalka iyo kooxda difaacanaysa horyaalka, kaddib markii Everton ay garaacday Chelsea iyo Manchester United bishii Febraayo ee sanadkii 2010-kii.
>- Leeds United ayaa hiigsanaysaa inay guuleysato afar kulan oo xiriir ah horyaalka, isla xilli ciyaareed gudahood markii ugu horreysay tan iyo bishii April ee 2001.
>- Ma jirto koox ka dhalisay goolal ka badan horyaalka Premier League bannaanka diilinta ganaaxa marka loo eego Leeds United oo xilli ciyaareedkan ka dhalisay 12 gool.
>- Liverpool ayaa guuleysatay saddex kulan oo xiriir ah horyaalka kaliya markeedii labaad xilli ciyaareedkan.
>- Reds ayaa badisay shan ka mid ah lixdii kulan ee ugu dambeeyay oo ay marti ahaayeen, taasoo ka badan intii ay ku soo heleen 15-kii kulan ee markaas ka horreeyey oo ay martida ahaayeen.
>- Mohamed salah ayaa noqon kara xiddigii ugu horreeyay ee Liverpool ah ee gaara 20 gool saddex xilli ciyaareed ee kala duwan horyaalka Premier League.
>- Tani waa markii ugu horreysay ee Liverpool laga badiyo sida ugu badan 10 kulan oo tartan rasmi ah hal sano gudihiis ka hor dhammaadka bisha April tan iyo sanadkii 1954-kii.
>- Kaliya labo ka mid ah 16-kii gool ee ay ka dhaliyeen Premier League sanadkan 2021 ayaa la dhaliyay qeybtii hore ee ciyaarta, labadaasna waxay ku yimaadeen waqtiga dhimashada ciyaarta 45 daqiiqo kaddib.
Muxuu yahay tartanka cusub ee European Super League?... (Cidda aas-aastay, Ujeedkiisa, qaabka loo ciyaarayo & Wax waliba oo aad uga baahan tahay tartankaan)